Bollebygd waxeey ka mid tahay tobonka degmo ee ugu korin badan dalka ku gudihiisa. Halkaan waxaad ka ag dageeysaa dabeecad weeyn, oo kuugu casuumeeyso howl dibadeed oo firfircooni leh, uu na dhaxeeyso magalooyinka Borås iyo Göteborg uuna dhaw madaarka Landvetters. Bartamaha Bollebygd waxaa ka heleeysaa oo ku dhaw adeegyada aad uu baahan tahay dhamaantood, ayadoo ee soo bandhiga magalooyinka weeyn ku jiraan lee dhow maayl. Halkaan waxaad dagnaaneeysaa bey’ad degan, caruurta waxeey dhigan karaan dugsi xanaano iyo iskuul leh tayo sareeyso, waxaana ka mid noqon kartaa jawi taajir ka ah ururada. Xarun-tareeyn cusub oo mustaqbalka ahaaneeyso jid tareeyn uu dhaxeeyso Stockholm iyo Göteborg, waxeey keeneeysaa in degmada sii korta hadana sii hormarto.
Markii aad xariir la lee dahay degmada ama hey’ad doowladeed, waxaad adigo ah qof afkiisa hooyo uu san aheeyn iswiidhiska, waxaad xaq uu lee dahay turjumaan haddii aad uu aragto in aa laga kaaftoomi karin. Caawinad turjumaan maantaa waxaa lagu soo bandhigi karaa luuqado badan. Sido kale axootiga taabo gelinta waxaa loo soo bandhigi karaa caawinaad turjumaan ayadoo la adeegsanaayo xarunta taabo gelinta xafiikeeda ee Bollebygd. Haddii aad turjumaan uu baahan tahay la xariir isku xiraha qaxootiga.
Västtrafik waxeey mas’uuliyad weeyn uu lee yihiin gaadiidka guud ee dad weeynaha iyo gaadiidka-xaafadaha ee degmadeena. Degmada ayaa ka masu’ul ah iskuul geeynta iyo adeega raacida.
Degmada waxeey rabtaa in ee sameeyso mustaqbal-shurudeed oo fiican, shirkadaha cusub oo ku jiro Xarunta Nyföretagar. Hey’addasi ee samafaleed waxaa kala wado shirkadaha, ula jeedaada waxeey tahay carcargelinta shirkado cusub oo xoog leh.
Göteborg 35 km